म्याग्नेसाईटलाई २० लाख बजेट: मजाक होईन, उद्योग चलाउनै हो- मन्त्री नेपाल ? (भिडियो) – मिलिजुली खबर
म्याग्नेसाईटलाई २० लाख बजेट: मजाक होईन, उद्योग चलाउनै हो- मन्त्री नेपाल ? (भिडियो)
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बन्द रहेको ओरेन्ट म्याग्नेसाईट उद्योगका लागि यो पटक फेरी २० लाख रूपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खर्च गर्ने गरी यो उद्योगका लागि २० लाख बजेट बिनियोजन गरेपछि एकपटक फेरी उद्योग सञ्चालन हुने झिनो आशा पलाएको छ ।
तर हजारौँलाई रोजगार दिएको बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न २० लाखले पुग्छ ? यहि प्रश्न अहिले उद्योग आसपास सिन्धुपाल्चोक र दोलखाका सर्वसाधारणले सोधेका छन् । सरकारले यति ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्न २० लाख मात्रै छुट्याउनु एउटा मजाकको बिषय मात्रै बनाएको बताएका छन् ।
यो उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुँदा ४ हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको बताईन्छ । तर माओवादी द्व’न्दसंगै उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द भएको एक दशक बढी भैसकेको छ । संघीय सरकारका उद्योग मन्त्रालयको जिम्मा पाउने प्रायः मन्त्रीहरूले पनि यो उद्योग जसरी पनि चलाउने बताउने गरेका छन् । तर बन्द भएको यतिका बर्षसम्म पनि सञ्चालन गर्न कसै हिम्मत गरेका छैनन् ।
अहिले बहालवाला बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपाल पनि सिन्धुपाल्चोक हुन् । यसअघिका प्रदेश उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री अरूण नेपाल पनि सिन्धुपाल्चोककै थिए ।
के २० लाखले उद्योग चल्छ त ? उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपाल भन्छन् ‘अब खरि उद्योग चल्छ ।’ तर यो प्रदेश सरकारले मात्रै चलाउन सक्दैन् । यो उद्योग संघीय सरकारको स्वामित्वमा छ । प्रदेश सरकारले चाहेर पनि कानुनत: धेरै निर्णय लिन सक्दैन । तर प्रदेश र संघले साझा सहमति गर्न सक्छन ।’
मन्त्री नेपाल थप्छन् ‘बिदेशी लगानी कर्ताको उपस्थितिको कारण प्रदेश सरकारले संघ सरकारसंग सहकार्य गर्नै पर्छ । खरि उद्योग चले पछि बागमती प्रदेशका खरिको धुलोमा आधारित उद्योगहरुमा बिदेश निर्भरता हट्ने छ र २ नं प्रदेशलाई पनि ठूलो टेवा पुग्ने छ ।
म्याग्नेसाईट उद्योग नै चलाउने अठोटमा प्राबिधिक अड्चन देखियो भने पनि क्याल्साईन म्याग्नेसाईट उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाट पनि मुलुकले मनग्य फाईदा लिन सक्छ । रोजगारीका नयाँ सम्भावना सृजना हुन्छ ।
‘क्याल्सिन म्याग्नेसाइट’ मात्रै पनि उत्पादन गर्न सकियो भने पनि पशु आहार, रासायनिक मल, ओैषधीहरु, अग्नि प्रतिरोधी पार्टेशन बोर्ड लगायत ५० भन्दा बढी चिज उत्पादनमा नभै नहुने बस्तु उत्पादन हुन्छ । यो बिश्व बजारमा नभै नहुने बस्तु हो ।
डेथ बर्न म्याग्नेसाइट मात्र उत्पादन नहुँदैमा उद्योग यसरी बन्द गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसैले सबै तहको सरकार मिलेर सहकार्य गरौ । पहिला खरि उद्योगमा त्यस पछि क्याल्साईनमा अनि डेथ बर्न म्याग्नेसाइटमा जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर प्रदेश सरकारले पाईला चालेको हो ।’ मन्त्री नेपालले आफ्नो फेसबुक वाल मार्फत प्रष्ट्याउँदै भन्नु भएको छ ।
विवाहित महिलालाई ब'लात्कार गरेको आ'रोपमा काँग्रेसका नेता प'क्राउ
काभ्रेको त्यो ढुङ्गा खानी : बस्ती तान्न खोज्दै, तर कोहि बोल्दैनन्, किन ? (भिडियो)